Myanmar Defence Weapons: MiG-29 of DPRK
မြန်မာပြည်သည် ဒို့ပြည် March 27, 2011 at 7:41 PM
အချိန်ရမယ်ဆိုရင် လစ်ဗျား စစ်ရေး ကိစ္စကို သုံးသပ်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ရေးပေးပါလား။ လစ်ဗျား မြို့တော်ဟာ ပင်လယ်ဘေးမှာ ရောက်နေတာ အားနည်းချက်လို့တော့ မြင်မိပါတယ်။ တနေရာမှာ ထောက်ပြသလိုပဲ လစ်ဗျားမှာ လေကြောင်းကာကွယ်ရေး စံနစ်ရှိပါလျက်နဲ့ လေယာဉ်တွေကို ပစ်ချနိုင်တယ်ဆိုတာ မကြားမိဘူး။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ။ လေယာဉ်တွေက ပစ်ချဖို့ အရမ်းကို ခက်ခဲလို့လား။ လေကြောင်းကာကွယ်ရေး စံနစ်တွေက တကယ် လက်တွေ့မှာ အသုံးမ၀င်ဘူးလား? နောက်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်က လစ်ဗျား ကိစ္စပေါ်ကနေ ဘာတွေ သင်ခန်းစာယူသင့်လဲ? ကျနော်က စစ်သား မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားလို့ မေးကြည့်တာပါ။
MM March 27, 2011 at 8:10 PM
ပြည်တွင်းစစ်ပြင်းထန်ချိန်မှာ အမေရိကန်က ဝင်တိုက်လိုက်လို့ပါ။ အုပ်ချူပ်မှုစနစ်မှာလည်း အားနည်းချက်ရှိနေလို့ပါ။ လစ်ဗျားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာလည်း ခေတ်နောက်ကျနေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်တွေဟာ တကယ်တော့ ပစ်ချဖို့ခက်လှတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ကိုဆိုဗိုအရေးအခင်းမှာ အမေရိကန်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အပ်ဖ်-၁၁၇ ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်ကြီးကို ရုရှားလေယာဉ်ပစ် ဒုံးနှင့်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင် ရုရှားရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ရေဒါတွေဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်တွေကို ဖမ်းနိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်။ကိုဆိုဗိုစစ်နောက်ပိုင်း အမေရိကန်လည်း ဒီလေယာဉ်တွေကို မသုံးရဲ့တော့ပါဘူး။အုပ်ချူပ်မှုစနစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။ဒီစစ်မှာ နေတိုးတိုက်လေယာဉ်တွေ ၊ရဟတ်ယာဉ်တွေ အတော်တော်များများ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်...။
mg March 28, 2011 at 5:21 AM
လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုတာ သာမာန်အမြောက် သံချပ်ကာနဲ့မရပါဘူး။တကယ်တမ်းဒါတွေက လေကြောင်းရံစာရင်းထဲတောင် ထည့်လို့မရဘူး။သာမာန်အမြောက်တို့ သံချပ်ကာတို့ဆိုတာ မြေပြင်ကနေ မြေပြင်ပစ်ဖို့အတွက်သာ အသုံးဝင်တာပါ။ဒါတွေနဲ့ ဒီနေ့ခေတ် လေယာဉ်တစ်စီးကိုပစ်ချဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးမှာ အဓိကအကျဆုံးက ရေဒါပဲ။ရေဒါဆိုတာ အချက်ပေးခေါင်းလောင်းတစ်ခုပဲ။ရေဒါ ခေတ်မမှီရင် ရန်သူ့လေယာဉ်က ကိုယ့်အိမ်နားရောက်နေတာတောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီအဖြစ်ပျက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့် ပထမဆုံး ခေတ်မှီတဲ့ ရေဒါရှိရမယ်။ထိုမှတစ်ဆင့် ရေဒါမှဖမ်းယူရရှိတာနဲ့ တန်ပြန်ပစ်ခတ်နိုင်မယ့် ခေတ်မှီ ဒုံးကျည်စနစ်ရှိရမယ်။အခြေခံကျတဲ့ ဒါတွေမရှိပဲ စစ်တိုက်ဖို့ ခုခံစစ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
မြန်မာအစိုးရ နေပြည်တော်ကို ရွှေ့တယ်ဆိုတာ စစ်ရေးဗျူဟာကိုကြည့်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။စစ်ရေးသာမက နိုင်ငံ့အလယ်မှာရှိတာကြောင့် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေအားလုံးနဲ့ ဆက်သွယ်မှုပိုမိုလွယ်ကူလာမယ်။အုပ်ချုပ်မှုမြို့တော်က ဗဟိုအလယ်မှာဆိုတော့ ပိုကောင်းသွားတယ်။ရန်ကုန်မှာက ရေကြောင်းနဲ့နီးတာကြောင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်လာရင် ဒီရေကြောင်းနဲ့နီးတဲ့ မြို့ကိုအရင်တိုက်မှာပဲ။ဒီအုပ်ချုပ်မှုမြို့ကျရင် ကျန်တဲ့ ဒေသတွေက အလိုလို အုပ်ချုပ်မှု ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် သာမာန်အရပ်သားအတွေးနဲ့ဆိုရင်တော့ မြို့တော်အသစ်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာကြောင့် ပိုက်ဆံကုန်တယ် ဘာညာပြောပြီး အပြစ်တင်နိုင်ပေမယ့် ဒီလိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ယူဆချက်တစ်ခုပါ။နောင်ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရတိုင်းအတွက်လည်း ကောင်းသွားမှာပါ။ပင်လယ်နားနေရတဲ့အတွက် မလုံခြုံမှုကိုမခံစားရတော့ပါဘူး။ဒီအစိုးရမပြောင်းလဲ နောင်အစိုးရတစ်ဆက်ဆက်မှာလည်း တစ်ချိန်မှာ ပြောင်းဖို့လုပ်မှာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလိုမြို့တော်ကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်နိုင်ငံတကာကတော့ လစ်ဗျားကိစ္စကို ကြည့်ရှုပြီး သုံးသပ်ပြင်ဆင်ကြမှာပါ။
kong March 28, 2011 at 9:06 AM
ပျဉ်းမနားကစစ်ရေးအချက်အချာကျတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြို့တော်ကိုပြောင်းစရာမလိုသေးဘူးစစ်ရုံးနဲ့Emergency Present Command Officeဘဲဖွင့်ထားရင်ရတယ်။မင်းUSA ARMYအကြောင်းဖတ်ဖူးလားဒါမှမဟုတ်RUSSIAN EMERGENCY WARFARE STRUCTUREအကြောင်းသိပါသလား။ငါတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာငါတို့ပြည်သူလူထုအတွက်လုတ်ပေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီအတွက်နေပြည်တော်( မြို့ )မှာအကုန်ခံမဲ့အစားနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအများကြီးcoverလုတ်လို့ရတယ်။နောက်ဆုံးအနဲဆုံးတောင်ဘယ်နိုင်ငံခြားကမ်ပဏီကိုမှshareခေါ်စရာမလိုဘဲဒီငွေနဲ့ကိုယ့်ဓာတ်ငွေ့ကိုယ်တူးပြီး100%ownerအနေနဲ့ငွေတွေပိုရနိုင်တယ်။
MM March 28, 2011 at 2:16 PM
အစ်ကိုတို့ရေ မြန်မာတပ်မတော် တိုးတက်စေချင်တာနှင့်ဘဲ ရန်ထမဖြစ်ကြပါနှင့် နော်.....ဟီးဟီးဟီး စတာပါ...
ကိုmg ပြောတာမှန်ပါတယ် ရေဒါ စနစ်ကောင်းတွေလို့အပ်တာမှန်ပါတယ်။လစ်ဗျားကို ပထမဆုံးတိုက်တဲ့နေ့က လစ်ဗျားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ် အစ်အေ-၈ တွေပစ်ချခံခဲ့ရတယ်...ဘာကြောင့်ဆို အဲဒီချိန်မှာ အစ်အေ-၈ ယာဉ်ပေါ်က ရေဒါက ပိတ်လျက်ရှိနေလို့ လေယာဉ်ကို ပြန်မပစ်နိုင်ခဲ့တာပါ...။